“Maan fileynin inaan fariisto kursiga keydka” – Matthijs de Ligt – Gool FM
(Turin) 25 Agoosto 2019. Daafaca xulka qaranka Holand iyo kooxda Juventus ee Matthijs de Ligt ayaa xaqiijiyay inay lama filaan ku noqotay, kaddib markii uu kursiga keydka kaga soo bilaawday, kulankooda furitaanka horyaalka Serie A xili ciyaareedkan, kaasoo ay xalay la ciyaareen naadiga Parma.
Kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa guul muhiim ah kaga daah furatay horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga xili ciyaareedkan cusub ee 2019/20, kaddib markii ay guul 1-0 ah ka gaartay naadiga Parma.
Wargeyska “CalcioMercato” ayaa shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay daafacan dhawaangalka ah kooxda Juventus ee Matthijs de Ligt waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Maan fileynin inaan fariisto kursiga keydka, inta lagu gudi jiray kulankii Parma, waxaan jeclaan lahaa xaqiiqdii inaan ciyaaro kulankan, laakiin ma aanan helin fursad aan wax walba ku fahmo inta uu tababarka socday, haddii aan ka qeyb galayo iyo haddii kale, laakiin waxaan ixtiraamayaa go’aanka tababaraha”.
“Waa inaan sidoo kale noqdaa mid macquul ah, wali waxaan ku jiraa marxalada isdhaxgalka ee halkan Talyaaniga, xiddigaha Bonucci iyo Chiellini oo nasiib u yeeshay inay ciyaaraan kulanka Parma, waxaa lagu tiriyaa inay ka mid yihiin daafacyada ugu fiican addunka, balse waxaan diirada saari doonaa sida aan boos kaga heli lahaa kooxda xili ciyaareedkan”.
“Waxaan ku raaxeysatay shantii toddobaad ugu horeeysay ee magaaladan Turin, aad ayey ugu adag tahay marka la eego xagga dhaqaalaha, laakiin waxaan ogaaday inaan noqday difaac xoogan”.
“Uma maleynayo in xaaladaha ay in badan ka duwanaan doonaan kuwii aan ku soo qaatay Ajax, luuqad ahaan waxaan aqaanaa ereyo badan oo kubbadda cagta ah, laakiin waxaan rabaa inaan si weyn u horumariyo ku hadlideyda luqada Talyaaniga, waxaan bartaa koorso shan maalmood ah usbuucii, marka waxaan dhihi karaa in wax walba ay u socdaan sida ugu fiican”.